rose of sharon February 1, 2012 at 5:54 PM
(အကြော်ဆို အကြော် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တမျိုးပဲရမယ်… ဟင်း ဟင်း ဟင်း…။)... အဲဒါလေးသဘောကျတယ်... တစ်မျိုးရတာတောင် ကျေးဇူးတင်ရဦးမှာကို..
မိုးငွေ့...... February 1, 2012 at 6:12 PM
ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားမိရင် လူအလိုလို စိတ်ချမ်းသာသွားတာမဟုတ်လားအမ... ခုချိန်မတော့ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ လူတွေကစက်ရုပ်အတိုင်း ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရပြီ...။ ဘ၀ဟာ တခါတခါတွေးမိရင် ဇယားကွက်အတိုင်းပုံသေသွားနေရလို့ တနေ့တခြားအဓိပ္ပါယ်မဲ့လာတယ်.....။ ဒါကြောင့် ရတဲ့ အချိန်ကလေးမှာ ဖဘတို့ ဘလော့တို့မှာ မွေ့လျော်တတ်တာလည်း နည်းလားအမ...။
MG THANT February 1, 2012 at 6:15 PM
အဘွားတွေ အဘိုးတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ... အခုလို ရုံးပြေးရ ဖေ့ဘွတ်ဝင်ဖွရတဲ့ လူကြီးငယ်ငယ်အကြောင်းတွေ ပြန်တွေးမိပြီး ကြည်နူးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် :D
သက်တန့်ချို February 1, 2012 at 6:15 PM
ဟင်းဟင်းဟင်း ငယ်ဘ၀မို့ မမေ့သာပေါ့း))
ဘလော့ဂင်းလုပ်တာသိပ်များနေတယ်လို့ ကုိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်ပြီးလျှော့ချင်နေတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တယ်။ ငယ်ဘ၀ကိုသိပ်ပျော်တယ်။ သိပ်ကြိုက်တယ်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 1, 2012 at 6:54 PM
ငယ်ဘဝ ကြိးပြင်းခဲ့ရပုံခြင်း တူတယ်မမရေ ညီမလေး ရဲ့အဘွားက ဆော့တာ မကြိုက်ဘူးလေ မိန်းခလေး ဖော်တွေ ဆော့နေတာတွေ ထိုင်ငေးရင်း ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆော့တဲ့ အကျင့်မရှိတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ခိုးပြိး ဆော့တိုင်း အရှုံးတွေနဲ့ ဆိုတော့ နောက်တစ်ခါ ဆော့ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလေ..:):) ငယ်ဘဝလေး တွေက ရိုးစင်းပြီး ချစ်စရာ အပြည့်နဲ့ပါလား မမရေ..
Aung Htut February 1, 2012 at 6:57 PM
ကလေးဘ၀ ကတော့ ဘ၀တစ်ခုလုံးရဲ့ အပျော်ရွှင်ရဆုံး အချိန်လို့ထင်တာပဲ.... အဲ့ဒါကြောင့် သား၊ သမီးတွေရလာရင် ဒီကောင်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆော့ခိုင်းရမယ်.. မဟုတ်ရင် သူတို့အတွက် ပျော်စရာအချိန်ဆိုပြီး ပြန်တွေးတောင် ဘာမှ ရေးရေးပေါ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး..... :P
It's common truth for many people that our childhood had less materials and rich pleasure mentally.Try ourselves to be happy foramoment.Life isn't long.
မအိမ်သူ February 1, 2012 at 7:47 PM
အင်မတန် အစိုးရိမ်ကြီးပြီး အချစ်လွန်တဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ လူဖြစ်ခဲ့ရတော့ ငယ်ငယ်တုံးက ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ကစားခုန်စားလုပ်ခွင့် မရခဲ့ဘူး။ အပေါင်းအသင်းလဲ မရှိသလောက်ပဲ။ အိမ်ပေါ်မှာပဲ တစ်ယောက်ထဲ သူများကလေးတွေ ကစားတာငေးပြီးကြီးပြင်းခဲ့ရတာ။ ဒါပေမဲ့ ငယ်ဘ၀လေးတွေကိုတော့ တမ်းတမိတာအမှန်ပါပဲ...း))
Kay February 1, 2012 at 8:26 PM
တို့လို တောက လူတွေက..သားရေပင် မကစားဘူးကွ..း))
mstint February 1, 2012 at 9:15 PM
sulay February 2, 2012 at 1:01 AM
မသက်ဝေပြောသလိုပါပဲ.. အားလုံးလူက နောက်ပြန်မလည်နိုင်တဲ့ ဘ၀စက်ယန္တရားကြီးက နေ၀င်ချိန်နီးလေလေ အရုဏ်ဦးရောင်ခြည်ကို ပြန်တမ်းတလေလေပါပဲ...။
အလင်းသစ် February 2, 2012 at 1:55 AM
တို့ငယ်ငယ်တုန်းအရွယ်.. ခေါင်းတုံးလေးတွေနဲ့ကွယ်... ပုဆိုးကိုစလွယ်သိုင်း... ရွာဝိုင်းပတ်လည်..။။
Hmoo February 2, 2012 at 2:02 AM
Nyi Linn Thit February 2, 2012 at 5:12 AM
မသက်ဝေက သီချင်းတွေ တော်တော်ရတာပဲ၊ ငယ်ဘဝ အကြောင်းကို အဲဒီတုန်းက နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြသွားတာ မိုက်တယ်၊ တဖက်ကလည်း အဲဒီသီချင်းတွေ ခေတ်ကောင်းခဲ့ချိန်ကို ပြန်ရှာလိုက်ရင် မသက်ဝေရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုကို ခြေရာကောက်လို့ ရသွားပြီ..၊း)
ကွန်ပြူတာနဲ့ တီဗီဟာ နေထိုင်မှု အနှစ်သာရ ကျဆင်းစေတယ် ဆိုတာတော့ တကယ့်ကို အမှန်ပါပဲ၊ မိသားစုထဲမှာတောင် verbal communication တွေ ဆိတ်သုဉ်းလာတာ အတော်များပြီ၊ လုံးလုံးကြီး ပစ်ပယ်လို့ကလည်း မဖြစ်ပြန်..ဟူး၊ အခုလောက် ရုပ် ဝတ္ထုပစ္စည်း မပြည့်စုံတဲ့ ငယ်ဘဝကို ပိုပြီးလွမ်းဆွတ်ကြ တာတော့ ကျနော်တို့ အားလုံးပါပဲဗျာ..။
Thandar Lwin February 2, 2012 at 8:45 AM
မမ ငယ်တုန်းက ဘ၀လေးကလဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ချစ်စရာလေး ။ ခုကြီးတော့လဲ သာသာယာယာ ဘ၀လေး ။ ဖတ်ရတာ မ၀ဘူး အများကြီးဖတ်ချင်တယ်။
mirror February 2, 2012 at 9:18 AM
မကြီးပိုစ့်ကို မနေ့ညနေထဲက လာဖတ်ထားတာ။ ဒီနေ့တစ်မနက်လုံးလဲ
ှပိုစ့်ထဲက Quality of Life ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ အထပ်ထပ် စဉ်းစားနေမိတယ်။း)
ဟိုတလောကမှ ရုံးကထွက်သွားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် ပြောတာလေးလဲပြေးသတိရမိသေးတယ်။ " စလုံးရောက်တာ ၁၂ နှစ်ရှိပြီ။ တစ်ရက်မှ အိပ်ရေးမ၀သေးဘူး " တဲ့။ :D
ဒါလဲ ကွာလတီအော့ဖ်လိုက်ဖ် ဆုံးရှုံးခြင်း တစ်မျိုးပဲလားမသိဘူးနော်။
SHWE ZIN U February 2, 2012 at 2:31 PM
ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုလို့ ငယ်ဘဝ မှာ အနှောင့်အဖွဲ့ မဲ့ နေခဲ့ရတာတွေ လွမ်းတယ်
မြသွေးနီ February 2, 2012 at 3:24 PM
ငယ်ဘ၀ကို မတရားကို လွမ်းသွားမိပြီအစ်မသက်ဝေ...
သားရည်ပင်ကြိုးအခုန်ကောင်းလို့ နဖူးကွဲရတာ သတိရသွားပြီ။ လွမ်းလိုက်တာ.......။ အဲ့ဒီမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး... အခုတော့ ဒီမှာလဲ ဒီလိုပါဘဲ..။ စက်ရုပ်တွေရဲ့ နေ့တဓူဝဘ၀ပေါ့..။ ရေဒီယို သီချင်းလေးတွေ ကြားရတော့ “ ပြား၆၀ပိုက်ဆံအကြွေ ..ပေးလိုက်စမ်းပါ ကလေးတို့အမေ ..." အဲ့ဒိသီချင်းတွေတောင် လွမ်းသွားရတယ်။ ခုတော့ ရေဒီယိုနားမထောင်တာ အနှစ်၂၀နီးပါးရှိနေပြီ..။
မဒမ်ကိုး February 2, 2012 at 5:02 PM
ငယ်ငယ်တုန်းကအရွယ်ကိုဘယ်လိုများပြီးဆုံးခဲ့လဲမသိတော့ပါဘူးမမရယ် အချိန်တွေကုန်မြန်လွန်းလို့ပါး)
အပြုံးပန်း February 3, 2012 at 12:00 AM
ချစ်ကြည်အေး February 3, 2012 at 8:47 AM
ပျော်စရာ ငယ်ဘ၀လေးပေါ့ သူငယ်ချင်းရေး)))
သတိရမိပါတယ်။ အဲတုန်းက တို့တွေ ကျောင်းမှာ ကစားတိုင်း ဘေးမှာ ခပ်ကုတ်ကုတ် ရပ်ကြည့်နေတတ်တဲ့ မျက်မှန်လေးနဲ့ ကလန်ကလားကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုး))
မြတ်ကြည် February 4, 2012 at 4:35 PM
ဇွန်မိုးစက် February 5, 2012 at 12:51 AM
ဇွန်လည်း အမလိုပဲ ငယ်ငယ်က ကစားခုန်ကစားဆို ဘယ်တော့မှ မရဘူး။ စာဖတ်တာ ၀ါသနာပါတာချင်းလည်းတူတယ်။ အဲ... မျက်မှန်ကတော့ ကြီးမှတပ်ရတာ။း)
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) February 6, 2012 at 3:55 PM
စာရေးသူရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက အရွယ်အကြောင်းလေးကို ဖတ်သွားတယ်။း)
ယောင်ပေစူး သီချင်းကို မြတ်လည်း ကြိုက်တယ်။
အဖြူရောင်နတ်သမီး February 7, 2012 at 12:37 AM
ИГАРЬ PAFOS February 7, 2012 at 8:28 AM
Hello friends! as successes.
ИГАРЬ PAFOS February 7, 2012 at 8:29 AM
ThuHninSee February 7, 2012 at 2:36 PM
ကန်စွန်းရွက်တောင် မချဉ်ရည်နိုင်ပါဘူး အစ်မရာ...
ချက်ပြုတ်ထားတာ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ များလှပါတယ်။
'ငပိကြော်အဆင်ပြေပါတယ် ကြက်ဥကို အကြော်နဲ့အ ပြုတ် ခွဲလို့… 'ဆိုရမယ် ထင်တယ်။
jasmine(တောင်ကြီး) February 9, 2012 at 2:38 PM
မျက်မှန်တပ်ရတယ် ၃-၄ တန်းကတဲကစတပ်နေရတာ
T T Sweet March 3, 2012 at 7:57 PM
အန်တီသက်ဝေ ခုချိန်ထိ အိမ်မှာ အကူမရှိပဲ အိမ်ရှင်မရော၊ carrier woman ဘ၀ရော၊ ဘလောဂါဘ၀ပါ အောင်မြင်နေတာ အရမ်းအံ့ သြနေတယ်။ အရမ်းကို တော်တာပဲ။ တကယ်ကို ချီးကျုးတာပါ။
Camera woman too...
She did very nice shots...